असह्य यथार्थ | :: A Backstreetboy's Diary ::
← झुठो संसार
मीठो विगत →
आज दिनभरी नै बिसन्चो महशुस गरिरहें । दिउँसो 12 बजेतिर दिनेश दाईले ‘हिंड जाउँ घुमेर आउँ’ भन्नुभो । पि.एन. क्याम्पसको डिलतिर गयौं । धेरैबेर बसियो त्यहाँ । फोटो पनि खिचियो । धेरै कुरा भए दिनेश दाईसँग । हुन त दाजु-भाई हामी यसरी सँगै घुम्न विरलै निस्कन्छौं । दाईले मलाई साथ लिएर हिंड्न कहिल्यै रुचाउनुभएन । कुरा गर्ने क्रममा सुख-दु:खका कुराहरु पनि भए । मेरो अवस्थाप्रति दिनेश दाईको सहानुभुति रहेको मैले पाएँ । र, मैले यो पनि भनिदिएँ कि ‘’त्यो’’ नै मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम प्रेम थियो । दाईले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । अनि पछि बगरको एक रेष्टुरेन्टमा कोकोकोला खाएर हामी फर्कियौं ।
आजको अनुभव मलाई साँच्चै अनौठो लाग्यो । दाईले मलाई पहिला कहिल्यै त्यसरी घुम्न जानको लागि आग्रह गर्नुभएको थिएन । र म आँफैलाई पनि अप्ठयारो लाग्छ, दिनेश दाईसँग हिंड्न । अब त एक्लै हिंड्ने बानी परिसकेको छ, एक्लै क्याम्पस जाँदा जाँदा ।
अहिले भर्खर उसले पनि ब्लग लेख्न थालेको थाहा पाएँ । साँच्चै त्यसले ब्लग लेख्यो आज, नितान्त पहिलो ; मेरो बारेमा, हाम्रो विगतको सम्बन्धको बारेमा । म वास्तवमै चिच्याएँ जब मैले त्यो थाहा पाएँ, खुसीले । आँखा रसाए । ‘’त्यो‘’ मेरो जीवन नै हो, वास्तवमा ।
मैले कतिचोटी दोहोर्र्याएँ होला, त्यसको त्यो पहिलो ब्लग, म आँफैलाई थाहा
छैन !!! हे ईश्वर, त्यसलाई पढ्न पाउँदा म आँफैलाई भाग्यमानी ठान्दछु । म कति खुशी छु आज, अहिले ! तर मलाई थाहा छ, यो मेरो खुशी धेरैबेर रहने छैन । जब मलाई त्यसले सँधैको लागि त्यागेको थाहा हुन्छ, म फेरि टुक्रा-टुक्रा हुनेछु । मेरो नियति । आँफैलाई आँफैप्रति दया लाग्छ ।